यात्रुसहित गुडिरहेको बसमा पेट्रोल बम प्रहार :: नारायण खड्का :: Setopati
यात्रुसहित गुडिरहेको बसमा पेट्रोल बम प्रहार
दाङ, वैशाख २२
काठमाडौंबाट दाङ आउँदै गरेको एउटा यात्रुबहाक बसमा पेट्रोल बम प्रहार भएको छ ।
अज्ञात समूहले कपिलबस्तुको गोरूसिङ्गे र चार नम्वरको विचमा पर्ने बन्गैं भन्ने स्थानमा शनिबार बिहान पेट्रोल बम प्रहार गरेको थियो। रा ६ ख ३९७० नम्वरको मालिका कालिका प्रालिको बसमा शनिबार बिहान ५ बजेतिर पेट्रोल प्रहार भएको प्रालिका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
पोखरेलका अनुसार दुई जनाको संख्यामा रहेका अज्ञात व्यक्तिले गुडिरहेको बसमा पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए। बम प्रहार गरे लगतै चालकको पछाडिको भागमा आगो लागेको थियो। ‘ड्राइभरको पछाडिको एक र दुई नम्वर सिटको नजिकको बडीमा ह्वाहार्ती आगो लागेपछि यात्रु र गाडिका स्टाफको प्रयासले आगो निभाइएको हो,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने।
उनले सम्भावित ठूलो क्षति हुनबाट बस जोगिएको जानकारी दिए।
काठमाडौंबाट दाङ तुलसिपुर तर्फ आउँदै गरेको उक्त बस अहिले प्रहरीले स्कटिङ गरेर दाङ ल्याउँदै गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। पेट्रोल बम कस्ले प्रहार गरेको हो? भन्ने सवालमा यकिनका साथ भन्न नसकिने अध्यक्ष पोखरेलले बताए। ‘नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको पनि नेपाल बन्द छ र अर्को तर्फ यातायात समितिहरु पनि आन्दोलनमा छन्। त्यसैले कस्ले पेट्रोल बम प्रहार गरेको हो भन्ने कुरा प्रहरीले पत्ता लगाउला,’ उनले भने।
चालकले के भने ?
उक्त बसका चालक चन्द्रबहादुर डाँगीले यात्रुले बसको बडीमा लागेको आगो चलाखी पूर्वक तत्कालन मिनरल वाटर हालेर निभाएको हुँदा ठूलो क्षतिबाट जोगिएको बताए।
‘गाडि चलाईरहेको थिएँ, ऐनामा एक्कासी आगो बलेको देखेर निकै आत्तिएँ। तर, चलाख प्यासेन्जरले आफ्नो मिनरल वाटर हालेर निभाउनु भयो,’ चालक डाँगीले भने।
यसैबीच उनले बिहान साढे ९ बजेतिर बस दाङको घोराहीको चौपट्टा आइपुगेको जानकारी दिए। ‘प्रहरीको स्कटिङमा आइरहेका छौं,त्यसैले चिया खाजा पनि खान पाएका छैनौं,’ चालक डाँगीले भने।
डाँगीले सडक छेउमा उभिएका दुईजना व्यक्तिले बसमा पेट्रोल बम हानेर भागेको बताए ।
दाङमा नेकपाको वन्दले जनजीवन प्रभावित
नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले गरेको एकदिने नेपाल वन्दका कारण दाङको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
त्यहाँ यातायात, कलकारखाना, बजार ठप्प छन् । फाट्टफुट्ट रुपमा मात्रै साना सवारी साधान सञ्चालनमा आएका छन् । दाङ जिल्ला सेक्रेटरी ‘विक्रम’को नामवाट जारी विज्ञप्तीमा बन्दका क्रममा उद्योग, व्यापार, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था सबै बन्द रहने जानकारी दिइएको छ।
विप्लवका दुई जना कार्यकर्ता पक्राउ
ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले नेकपाका दुईजना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ निवासी २० बर्षीय अर्जुन सुनार र तुलसीपुर १५ निवासी १७ बर्षीय जनार्दन बोहोरा पक्राउ परेको ईप्रका तुलसीपुरका प्रमुख प्रकाश सापकोटोले जानकारी दिए । उनीहरुलाई शुक्रवार साँझे मसाल जुलुस प्रदशनको क्रममा तुलसीपुरवाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबार यातायात नचलाउने समितिका सातजना पक्राउ
प्रहरीले दाङमा शुक्रबार यातायात नचलाउने सात जना समितिका व्यक्तिहरु पक्राउ परेको छ।
दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं एसपी दुर्गा सिंहले शुक्रबार राति ९ बजेपछि राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका कार्यालय प्रमुख सिताराम शर्मा आचार्य, डायल इञ्चार्ज मोहन पुरी, कर्मचारी कृष्ण केसीलाई प्रहरीले तुलसीपुरवाट पक्राउ गरेको जानकारी दिइन्।
त्यस्तै प्रहरीले तुलसीपुरबाटै अम्विकेश्वरी यातायात समितिका उपाध्यक्ष डिल्लीबहादुर भण्डारी, घोराही १० नारायणपुरवाट राप्ती समितिका कार्यसमिति सदस्य रामचरण वली, कर्मचारी गणेश पाण्डे, ट्रिप्पर व्यवसायी समितिका कार्यसमिति सदस्य गोविन्द कुमार रावतलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २१, २०७५, २३:१७:२६